Last Shelter: Survival 1.250.138 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.250.138 လြန္ခဲ့ေသာ2မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Last Shelter: Survival
Last Shelter: Survival ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဆုလာဘ်များ, လီမိတက်အထုပ်များ၏တန်ချိန်, ACT စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့!
သူတို့ကဒီနေရာမှာနေ ... ..
အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်နှင့်လူသားအများစုယခု zombies.In ယင်းသို့ဆိုးရွားအချိန်များမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သန်မှုသေချာစေရန်ရှိသည်!
သင့်ရဲ့မြို့ကိုတည်ဆောက်: ရှင်သန်စေရန်, သင်သည်သင်၏အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်ရှိသည်
သငျသညျအသေး start, သင်မူကားအစာရှောင်ကြီးထွားမည်, သင်တို့သည်အားကြီးသောဖြစ်ဖို့ရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ပိုမိုလူတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုငျသညျ!
Find သို့မဟုတ် Start အနေနဲ့မဟာမိတ်: လူများတို့သည်ကမ္ဘာကြီးအနှံ့အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားနေကြတယ်, သင်၏မိတ်ဆွေများကိုရှာဖွေတစ်ခုမဟာမိတ်တည်ဆောက်, သင်၏ရန်သူလက်မှကိုယ်ကိုကိုယ်ခုခံကာကွယ်
- အတန်းအစားကိုရွေးချယ်ပါ: သင်သင့်ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်အကြံထမြောက်ရသောအဖို့သုံးအတန်းတစ်ဦးအနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်!
-Combat: ကွဲပြားခြားနားသောယူနစ်ဆုံးမသှနျ, သင်၏အင်ပါယာအဘို့စစ်တိုက်ခြင်း,
[နောက်ဆုံး Shelter: Survival] တစ်ဦးကြီးမားတဲ့ Multi-Player ကို, ဖုတ်ကောင်အခြေတည်မဟာဗျူဟာစစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကစားသမားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတစ်ဦး Apocalyptic ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ပွားမှုအားဖြင့်ပျက်စီးနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာသေးငယ်တဲ့ Shelter ၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အင်ပါယာဖွံ့ဖြိုး။ သင့်ရဲ့တပ်တွေလေ့ကျင့်နှင့်ဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်းစုဆောင်း။ သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းခုခံကာကွယ်နှင့်သင့်ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်။ ဘုန်းအသရေနှင့်ကျော်ကြားမှုတစ်ခု-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှစစ်၌သင်တို့၏မဟာမိတ် join ။
Wide စစ်ပွဲ -World
ကမ္ဘာအနှံ့စစ်တိုက်ရန်သူများကို, greatness နှင့်နောက်ဆုံးလူသားရဲ့ရပ်တည်မှုသည်အထိတိုက်ထုတ်ရန်သင့်အင်ပါယာဦးဆောင်လမ်းပြ။
ယင်းယူနစ်ကနေမြေပုံဖို့သူရဲကောင်းများမှအရာအားလုံးကိုအလွန်လက်တွေ့ကျပုံရသည်နှင့်ပြည့်စုံ post ကိုကမ္ဘာပျက်အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
လုံးဝအခမဲ့စီးတီးအဆောက်အအုံ, အဆောက်အဦအဆင့်မြှင့် R & D ကို, စစ်သည်တော်များနှင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူသင်တန်းနှင့်အစွမ်းထက်သူရဲကောင်းစုဆောင်းမှုရုံကမ္ဘာသစ်အောင်နိုင်အားအသစ်သောနေ့ရက်ကိုအသကျရှငျ၏မျက်နှာကို ထောက်. !
သငျသညျ, အကွာအဝေးမှသင်၏ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အနီးကပ်ရပ်ကွက်မှာခုခံကာကွယ်, သို့မဟုတ်သင့်အခြေစိုက်စခန်းသို့မဟုတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲပျော်မွေ့လိုဖွစျစေ, အားလုံးကြောင်းဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းသူရဲကောင်းများ၏တန်ချိန်ရှိပါတယ်!
ယူနစ်တစ်ခုမှာအစုံပဲရိုးရိုးသငျသညျဆိတျညံရာ၏ဤ World War Z ကြင်နာလမ်းလျှောက်ဖို့သင်တို့၏ရန်သူနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရန်ရှိသည်, စစ်သည်များ, သေနတ်သမားများနှင့်ယာဉ်များအောင်နိုင်မနိုင်
ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောဆာဗာများကိုဆန့်ကျင်မယ့်, ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာသမ္မတ၏ခေါင်းစဉ်ကိုတိုက်ခိုက်နေရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်မဟာမိတ်အမြဲနေသမျှကာလပတ်လုံးကိုသင်သင်တန်း၏ညာဘက်လူတွေရှာတွေ့အဖြစ်, သငျသညျအရန်ကူးပါလိမ့်မည်။
Facebook က & Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကို join
Last Shelter: Survival အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Last Shelter: Survival အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Last Shelter: Survival အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Last Shelter: Survival အား အခ်က္ျပပါ
liberis2897 စတိုး 1 1.27k
Last Shelter: Survival ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Last Shelter: Survival အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.250.138
ထုတ်လုပ်သူ IM30 TECHNOLOGY LIMITED
File Size: 228.19MB
Release date: 2019-08-17 11:13:29
လက်မှတ် SHA1: 1F:36:03:69:13:27:F5:0B:18:4B:AE:A0:92:C6:C3:E6:08:D9:9A:0D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): DayZSurvival
အဖွဲ့အစည်း (O): im30
နိုင်ငံ (C): 100085
Last Shelter: Survival APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ